Qandaraaska Muuqaalka Sare ee Gebze Muuqaal Xiiso Leh Oo Ka Socda Shirkadaha Giant | RayHaber | raillynews
HometareenkaDanta Muhiimka ah ee Shirkadaha Giant
01 / 02 / 2018 tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Metro, TURKEY
Kocaeli degmada Metropolitan fuliyay by 15,6 ku curdan pre-bixitaanka ku-Gebze kiiloomitir Metro Line ku biiray shirkadaha hoggaamineed ee Turkey. 3. Shirkadaha sida Gülermak, Nurol, Kolin, Cengiz, Özaltın, Doğuş, İçtaş iyo TAV Tepe Akfen waxay codsadeen u-qalmitaanka qandaraasyada waaweyn sida garoonka diyaaradaha, buundada Osmangazi iyo İzmir Highway, Ankara-İstanbul YHT Line, Dubai Metro.
CODSIYADA CIIDAMADA 15 EE SIYAASADA
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay qaaday talaabada ugu horeysa ee loo yaqaan 'Line Line' ee u dhaxaysa Gebze iyo Darıca. Qandaraaska loogu talo galay in lagu iibsado Khadka Gebze Metro Line waxaa lagu qabtay Hoolka Golaha ee Dhismaha Adeegga weyn ee Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli. Iskaashiga 15 wuxuu ka qeybqaatay gorgortanka prequalification. Qandaraaska horudhaca ayaa waxaa ku xigey Xoghayaha Guud İlhan Bayram iyo kuxigeenka Xoghayaha Guud Mustafa Altay iyo Doğan Erol.
DIIWAANGALINTA Shirkadaha GIANT
Shirkadaha kaqeybgalaya qandaraaska hordhaca ah ee Gebze Metro waxay garteen mashruucyo waaweyn dalkeena iyo aduunkaba. Dhismaha Wadada Wadada Makyol ee Magaalada Istanbul III. Tallaabada IV. Qeybta Levent-Ayazağa, Dhismaha Gülermak Sabiha Gökçen - Kaynarca Metro Line Construction, Dubai Metro Expo 2020 Construction, Poland Warsaw Metro Line 2 Dhisme, Kolin Construction Gayrettepe-İstanbul Terminalka Khadka Diyaaradaha New Airport, Dhismaha Nurol Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Mashruuca, Arifiye - Sincan Railway Project, Ayaş Tunnel, Doğuş Construction Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Line Construction - Dhismaha Mashruuca Dheeraynta Bulgaria Sofia, Ankara - İzmir Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare, Yüksel İnşaat Ankaray Nidaamka Tareenka Iftiinka Light, Doha / QATAR Subway RTC / 074 / 2013 Khadka Cas ee Koofurta Koowaad kor loo qaaday iyo Heerka Isgoysyada Dhismaha mitirka, Dhismaha Xarunta Dhismaha Qatar Doha Metro Construction Work, Algeria Sidi Bel Abbes Tram Line Work Work, Algeria Setif Tram Line Work Work Construction, Morocco Casablanka Tram Line 2. Shaqo goynta, Özaltın Dhismaha meekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro & Sarıgazi (Isbitaal) - Taşdelen - Yenidoğan Metro, Sivas - Erzincan High Speed ​​Railway Project Qaybta I, Palu - Genç - Muş Railway Line Supply project and Construction, Mapa Construction Kralkızı Dam iyo Dambi Warshad Tamarta Hawada, İkizcetepeler Dam, TAV Tepe Akfen Construction Atatürk International Airport, Qaahira, Tbilisi, Gazipaşa Batumi, Adnan Menderes, Esenboğa Madaarada, ,TAŞ Dhismaha İstanbul 3. Buundada Bosphorus iyo Waqooyiga Badda Marmara Wadada Isku xirta ST Petesrburg Bridge, Ordu-Giresun, Madaarka Antalya.
KU SOO DHAWAADA KOCAELİMİZ
Hale Tani waa maalin muhiim u ah Kocaeli. Qandaraasyadii ugu waynaa ee ay waligeed haysey Dawladda Hoose. Waxay ahayd baahi muhiim u ah magaaladeena. Waxaan u sameynay hindise-soo-saare mashruuc. Shirkadda 15 ayaa ka qayb qaadatay. Shirkadahaan, 7 waxay uqalmayaan heerka labaad. Mid ka mid ah shirkadaha keentay Turkey ee ay leeyihiin shirkadaha ugu weyn. Waxaan ku faraxsanahay dareenkan. Waa kuwan shirkadaha yaqaan ganacsiga. Waxaan rajeynayaa in guddigu ay xushaan 7 oo iyaga ka mid ah. Waxaanna u gudbi doonnaa marxaladda labaad muddo gaaban gudaheed. Waxaan siin doonaa 40 waqti si loogu diyaariyo shirkadaha u qalma. Waxaan qorsheyneynaa inaan qabanno qandaraaska labaad qeybta labaad ee Maarso. Waxaan rabnaa inaan bilowno dhismaha tareenka dhulka hoostiisa ah qeybta hore ee sanadkan. Waxaan rajeyneynaa inay faa iido u tahay dalkeena iyo dalkeena. ”
KOCAELİ KA SOO GUURID
Bayram wuxuu kaloo sameeyay qiimeyn ku saabsan isdhaxgalka Istanbul wuxuuna yiri, "Waxaan geyn doonnaa saldhiggayaga Gebze OIZ, oo noqon doona halka aan wadaagno ee saldhigga Gebze Marmaray, ilaa Sabiha Gökçen Airport. Daraasadahaani waxay ku socdaan habka loo maareeyo qorshayaasha. Macnaha guud, waxaan qorsheyneynaa inaan ku biiro mitirkeena magaalada Istanbul. Xulashadayada 4 ayaa horay loo sii saadaaliyay mashruuc nus sano ah. Waxaan ku maalgelin doonnaa magaalo ahaan. Bixinta horumarka billaha ee 50 Million TL ayaa la xaqiijin doonaa. Tani waa dhacdo dhaqaale oo muhiim ah. Mashruucu wuxuu muujinayaa in Kocaeli loogu dalacday horyaal sare. ”
Dhismaha Bimhol + Demce Dhiska + Dhismaha Bestaş + Dhismaha Efecemler
Dhismaha Genç + Dhismaha Yüksel + Dhismaha Dentaş + Özka Construction
Dhismaha Makyol + IC İçtaş Dhismaha + Dhismaha Astur
Dbh Yo Aş + Gürbağ Construction + Yedgöze Construction + Teb Ener. Inc + Ohitan Const.
Dhismaha Cengiz + Dhismaha SSC
Dhismaha KMB Metro + Kutlutaş Inc. + Dhismaha Çelikler + YSE Construction Inc.
Dhismaha Gülermak + Dhismaha Doğuş + Dhismaha Nurol
Galician Ray + Metrostav Dhismaha + Tamyap Aş + Dhismaha Fernas + Kaabayaasha Muuqaalka
Xarunta Dhismaha + Dhismaha Özaltın + Dhismaha Tavtepe
Bayburt Group Inc + Choline Construction + Aga En. Aş + Dhismaha Hore + Şenbay Mad.
Dhismaha RBI + Didoray A.Ş.
KHUDBADKA LINE WUXUU DIIXI KARA 94
Inta lagu gudajiro howlaha dhismaha, shaqooyinka waxaa loo soo marinayaa tunn qolof qoto dheer si aan saameyn nolol maalmeedka u saameyn. Khadka kilomitir ee '14,7 kilomitir' waxaa loo dhisi doonaa sida tunnel heerka 900 mitir. Qadka metrooga ee Gebze waxaa lagu qalabeyn doonaa rakaabka 4, halkaasoo loo isticmaali doono GoA4 darawallada bilaa darawalnimada ee otomatiga ah. Xariiqa metrooga tareenka ee 1080 kilomitir oo leh waddo darawalnimo tareenka ee 12 ayaa awood u yeelan doona inuu ku safro ilbidhiqsiyo iyadoo la adeegsanayo qalabka calaamadaha 15,6. Xariiqda mitirka 90 kilomitir ee u dhexeeya Gebze iyo Darıca waxaa loo qorsheeyay in la dhammeeyo oo la geliyo adeegga kun maalmood 15.6 maalmood. Gaadiidka u dhexeeya Darıca, Gebze iyo OIZs waxaa la bixin doonaa daqiiqadaha 560.
12 STATION 19 MINUTES
Gaadiidka Metro waxay ka jawaabi doonaan dhammaan noocyada dayactirka iyo dayactirka, aagga dayactirka iyo dayactirka, bakhaarada gaadiidka iyo xarunta xakamaynta iyo kontoroolka ayaa la qaban doonaa dhamaadka khadka taleefanka Pelitli. Xarunta TCDD ee qorshaysan ayaa isku xiraysa magaalooyinka kale, gaar ahaan Istanbul, iyada oo loo marayo Marmaray iyo Tareenka Xawaaraha Sare. Safarka ka bilaabi doona Saldhigga Dariska Beach, saldhigga koowaad, waa 12. iyo saldhigga ugu dambeeya, saldhigga OSB, ayaa lagu dhammeeyn doonaa wax yar oo ah daqiiqado 19.
LAGU MAGACAABO MUHIIMKA
Tiknoolajiyadda ugu dambaysa ayaa loo isticmaali doonaa mashruuca 4. Waxay ku taallaa heerka heerka qalabka (GoA4) wuxuu si buuxda u siin doonaa adeegga tareenka ee aan darawalka lahayn. Waxqabadka sarreeya, kalsooni sarreeya iyo waqtiyo safar hooseeya, kharashka hawlgalka oo yar, helitaanka jawaabta dalabka darawalka, kordhinta jiidashada tareenada. Sababahan oo kale, nidaamka gawaarida si buuxda oo toos ah, oo ah kala-guurka caalamka, ayaa sidoo kale lagu hirgelin doonaa line-ka Gebze-Darica.
LAMBARKA WAQTI WAA LAGA QAADAN KARAA MARKA LOO BAAHAN YAHAY
Nidaamkani wuxuu bixiyaa dardargelin sare, gawaarida iyo xawaaraha socodsiinta wakhtiga safarka ugu hooseeya ee u dhaxeeya joogsiyada. Natiijada, waqtiga celceliska sugitaanka ee rakaabka waa uu yaraa marka la raacayo godadka rakaabka rakaabka. Waqtiyada sugitaanka ee saldhigyada waxaa laga bedeli karaa Xarunta Koontaroolka iyadoo la raacayo shuruudaha. Waxaa jira dib u dhac dheeraad ah oo ku yimaada tareenka kufsiga ee tareenada aan shaqaale lahayn. Waqtiga dib u dhacida waxaa laga tirtiri karaa isla markiiba soo-celinta tareenada ee saldhigyada ugu dambeeya, ama tareenada gawaarida ayaa lagu dari karaa nidaamka si looga saaro kala go'a.
DHAMMAAN DHAQAALAHA KA SOO SAARAYA XARUNTA XAALADA
Maadaama baddalka darawalka ee darawalku uu wakhti ku qaadanayo tareenada darawaliinta, waqtigaa dib u dhacani way adagtahay in la tirtiro. Maadaama aysan jirin darawal aan nidaamsanayn tareenada dariiqa, dhammaan waxqabadka iyo kantaroolka darawalka waxaa laga sameeyaa Xarunta Xakameynta Gaadiidka iyada oo la adeegsanayo nidaamyada elektarooniga ah. Dhibaatada, dabka, xaaladaha degdegga ah, sida saldhigga tareenka ee xarunta xakamaynta iyadoo la raacayo xogta qaylo-dhaanta ee laga helay saldhigga goobta shaqada. Dhammaan waxqabadyada waxaa lagu qabtaa Xarunta Xakamaynta.
MILSILADA YUROS waa la badbaadin doonaa
Iyadoo la adeegsanayo line-upka Gebze, hoos u dhaca qiimaha gaadiidka wadada ee ka weyn baabuurta 2023 ee 11 ayaa la gaari doonaa, iyada oo laga bilaabi doono 2035 baabuurta million ee 37 iyo kordhinta sanad kasta. Tani waxay ka bilaabi doontaa 2023 million euro ee 6 oo kordha sanad kasta, taas oo keentay in kaydka ka badan € 2035 million euro ee 16. Sannadkii tagay 2035, guud ahaan kaydka in ka badan € 136 million ayaa la gaari doonaa. Marka laga reebo sidan, 2 ayaa badbaadin doonta TL miisaan ahaan dayactirka waddooyinka iyo dayactirka waddooyinka.
XAALADA DEEGAANKA MALAHAN
Markii la bilaabo qadka metrooga Gebze, kharashyada loo istcimaalo in lagu baabi'iyo wasakhda deegaanka ayaa la yarayn doonaa. Laga bilaabo 2023 kun oo Euro oo ku yaal 126, kharashyada deegaanka ee la filayo inay gaaraan 2035 kun oo Euro oo ku yaal 387 ayaa laga tirtirayaa sannad kasta. Tani waxay ka hortageysaa qiimaha baabi'inta wasakhda deegaanka ee 2035 milyan oo yuuro 3,3. Goobta xirmooyinka qoraxda ee 5000 mitir murabac oo laga dhisi doono goobta bakhaarka ayaa loo qorsheeyay in lagu baabi'iyo kharashaadka korantada ee shirkadda ee loogu talagalay baahiyaha gudaha. Adeegsiga soo noqnoqda ee biyaha ee unugyada burburka gawaarida, aragtida ka bixitaanka adduun cagaaran jiilka dambe ayaa la abuuray iyadoo la yareeyo isticmaalka biyaha.
Laga soo bilaabo Shirkadaha Gudaha iyo Dibadda ilaa TÜDEMSAŞ's Stand…
Ma jirto wax xiiso u ah Xarunta Tareenka Xawaaraha Sare
Danta Muhiimka ah ee Tareenka Qaranka Sare ee Tareenka
Shisheeyaha Gawaarida Guryaha Waxaa Soosaaray TÜDEMSAŞ Yabancı
Mardin Castle Cable Car ee Shirka Habitat…
Gebze - Darica Metro
Xarunta Gebze Marmaray
Qandaraaska Gebze Metro Line